भारतको सबैभन्दा भरपर्दो अनलाईन होटल बुकिंग प्लेटफार्महरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी मार्केटप्लेस समाचार
अप्रिल 19, 2021 अप्रिल 19, 2021 साहिल सचदेवा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B
भारतमा, ब्याकप्याकरहरूको ठूलो संख्या ट्रिभगोलाई उत्तम मूल्यमा होटल बुक गर्न प्रयोग गर्दछ।
अन्य अनलाइन होटेल बुकिंग प्लेटफर्महरू जस्तै, पर्यटकहरूले लक्जरीहास्टमा होटल खोज्न र बुक गर्न सक्छन्।
आजका दिनहरूमा, Tripadvisor विश्वभर भरपर्दो होटल बुकि plat प्लेटफर्म मध्ये एक हो।
त्यस्तो समय भयो जब पर्यटक ट्राभल एजेन्टहरूमा निर्भर हुन्थे वा आफैंले सम्पूर्ण टुरिंग योजना गर्नु पर्ने थियो। तर सबै इन्टरनेटको कारण अब क्रमबद्ध छ। धेरै जसो यात्रा अवरोधहरू अब अनलाइन होटेल बुकिंग प्लेटफर्मको साथ समाधान गरिएको छ।
आजका दिन, धेरै प्लेटफर्महरूले यात्रा सेवाहरू पूरा गर्छन्। तर होटल बुकि forका लागि धेरै थोरै विश्वासयोग्य छन्। अब, यदि तपाईं भारतमा सब भन्दा भरपर्दो अनलाईन होटेल बुकिंग प्लेटफर्मको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, अब हामी तपाईंलाई बताउँछौं।
ट्राइवागोमा यात्रीहरूसँग होटलहरू फेला पार्न, मूल्यको तुलना गर्न, र सबै विकल्पहरू बीचमा उत्तम डिल छनौट गर्न पहुँच छ।
भारत २०२१ मा सब भन्दा भरपर्दो अनलाईन होटल बुकि Pla प्लेटफर्महरू हेर्नुहोस्।
तीन विश्वविद्यालय मित्रहरू द्वारा (रोल्फ श्रामेजेन्स, पीटर भन्नेमेयर र स्टीफन स्टुबनर) ट्राइवागोको स्थापना भयो। यसको अवधारणा २०० 2005 मा जर्मनीको डसेलडोर्फमा भयो। भारतमा, यो २०१ 2016 मा सुरू गरिएको थियो। अब, ट्रिवागो भारत सहित विश्वभरि एक प्रख्यात नाम हो।
ट्राइवागोमा यात्रीहरूसँग होटलहरू फेला पार्न, मूल्यको तुलना गर्न, र सबै विकल्पहरू बीचमा उत्तम डिल छनौट गर्न पहुँच छ। भारतमा, ब्याकप्याकरहरूको ठूलो संख्या ट्रिभगोलाई उत्तम मूल्यमा होटल बुक गर्न प्रयोग गर्दछ। चाहे यो कुनै शहर वा कुनै प्रकारको यात्रा जस्तो सोलो, समूह, परिवार, हनिमून, आदि।
२. लग्जरी होस्ट
वर्षमा 2019, लक्जरीहोस्ट स्थापित भएको थियो। यो भारतको आफ्नै अनलाईन होटल बुकिंग प्लेटफर्म हो। लक्जरीहास्टको आत्मा विचार भनेको यात्रुहरूको आवास, ट्याक्सी सुविधा, साहसिक गतिविधि, आदि सेवा प्रदान गर्नु हो सहजताका साथ भारतको अन्वेषण गर्न।
अन्य अनलाइन होटेल बुकिंग प्लेटफर्महरू जस्तै, पर्यटकहरूले लक्जरीहास्टमा होटल खोज्न र बुक गर्न सक्छन्। लग्जरी होस्टमा सम्झौता उत्तम हो किनकि धेरै होटलहरू दर्ता छन्। लक्जरीहोस्टमा, ब्याकप्याकरहरूले हरेक प्रकारको आवास पाउन सक्दछन्।
उदाहरण को लागी होटेल, गेस्ट हाउस, लज, मोटेल, इन, होमस्टे इत्यादि इत्यादिका लागि, केवल २ बर्षमा लक्जरी होस्टले बजारमा ठूलो सफलता र विश्वास कमाएको छ शीर्ष सेवाहरू प्रदान गरेर। वास्तवमा, अब असंख्य ब्याकप्याकरहरूले लग्जरी होस्टलाई विश्वास गर्दछन् जब यो अनलाइन होटेल बुकिंग वा या त अनलाइन क्याब बुकिंग सेवाको कुरा आउँछ।
ट्रिप्याडभाइजर अन्य अनलाइन होटेल बुकिंग प्लेटफार्महरू विपरीत छन्। किनभने यसले रेस्टुरेन्ट बुकि fromका साथै अन्य पर्यटकहरूका सिफारिश सिफारिशहरू प्रदान गर्दछ। तसर्थ, यो ब्याकप्याकरहरूको लागि सबै भन्दा भरपर्दो प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो। थप, Tripadvisor सबै प्रमुख सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन यात्रुहरूलाई छुट्टीमा वा यात्राको योजनाको बखत आवश्यक पर्दछ। उदाहरण को लागी दिशाहरु, समीक्षा, मूल्यहरु, र दर्शनीय स्थलहरु, इत्यादि को लागी, यी दिन, Tripadvisor विश्व भर मा एक भन्दा विश्वसनीय होटल बुकि plat प्लेटफर्महरु मध्ये एक हो।
भारतको आफ्नै साइट जसले पर्यटकहरूलाई उनीहरूको यात्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र अधिक गर्न मद्दत गर्दछ। यता हवाई टिकट, होटल कोठा, छुट्टी प्याकेज, बस, कार भाडा, इत्यादि जस्ता विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
यात्रा गुडगाँवमा आधारित कम्पनी हो जुन २०० in मा स्थापना भएको थियो। आजकल यो ट्राभल ईन्डस्ट्रीमा एक कम्पनी हो जुन द्रुत गतिमा बृद्धि भइरहेको छ। कम्पनीले बजारमा उत्तम सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ त्यसैले मानिसहरूले यात्रा यात्राको लागि यात्राको प्रयोग गर्छन्।
वर्ष २०० In मा, Goibibo शुरू गरिएको थियो। यो इबीबो समूहको एक हिस्सा हो। कम्पनीले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन होटल, उडानहरू, ट्रेनहरू, बस र यात्रुहरूको लागि कारहरूमा छन्।
मुख्य लक्ष्य Goibibo ग्राहकको अनुभवलाई यात्रा को सबै पक्षहरुमा सहज बनाउनका लागि हो। यो होटल खोजी वा होटेल बुकिंग हो, गोबिबोले कम से कम समयमा कुशल सेवा पुर्‍याउने कुरामा विश्वास गर्दछ। यही कारण हो कि Goibibo ले GoStay र GoCash सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
Goibibo एक साइट हो जुन उत्तम सेवाहरू प्रदान गर्दछ हरेक प्रकारका यात्रुका लागि यात्रा सजिलो बनाउन।
अनलाइन होटल बुकिंगका फाइदाहरू
अनलाइन होटेल बुकिंगका अनगिन्ती सुविधाहरू छन्। २१ औं शताब्दी इन्टरनेट क्रान्तिको लागि परिचित छ। आजकल, सबैजना सुविधाहरूको लागि प्रत्येक प्रकारको कामको लागि आफ्ना फोनहरू प्रयोग गर्दछन्। यसबाहेक, होटल बुकि forका लागि इन्टरनेट पहुँच गर्ने थुप्रै फाइदाहरू छन्।
तल हामी अनलाइन होटल बुकिंगका सबै प्रमुख फाइदाहरू छलफल गर्नेछौं। सुरु गरौँ!
Goibibo को मुख्य लक्ष्य ग्राहकको यात्रा को सबै पक्षहरु मा सहज बनाउन को लागी हो।
ट्राभल उद्योगमा, यो सेवाहरू २ to/। प्रदान गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। पाहुनाहरुको आगमन सँधै अप्रत्याशित हुन्छ; त्यसकारण, कर्मचारी स्वागतको लागि सँधै तयार हुनुपर्दछ। यद्यपि, पहिलो र प्रमुख कुरा उपलब्धता हो।
हरेक ठाउँमा वा व्यवसायमा राम्रो व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ। यदि होटेलसँग अनलाइन होटेल बुकिंग प्रणाली रहेको छ भने स्टाफले कामलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्छ। अन्यथा, म्यानुअल प्रणाली समय उपभोक्ता हो र क्वेरीहरू ह्यान्डल गर्न म्यानपावर चाहिन्छ।
अनलाइन होटेल बुकिंग प्रणालीसँग धेरै विश्लेषणात्मक उपकरणहरू छन्। यसैले, यसले व्यवसायको अन्तर्दृष्टि बुझ्न मद्दत गर्दछ जसले एक व्यवसायले काम गर्न सक्दछ वा त्यस हिसाबले काम सम्पादन गर्न सक्छ।
एक अनलाइन होटल बुकिंग प्रणाली को एक धेरै रोचक र महत्वपूर्ण लाभ। यो होटल बुकिंग को पुरानो तरीकाको तुलनामा अधिक राजस्व उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। होटेल सूचीबद्ध गर्नु वा विभिन्न प्रकारका पर्यटकहरूका लागि प्याकेजमा थप सम्झौताहरू सिर्जना गर्नु धेरै सजिलो र ग्राहकहरूको लागि विश्वस्त छ।
एक अनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफार्म को उपयोग गरेर, यसले स्टाफको काम सजिलो र सजिलो बनाउँछ। ग्राहकहरूले 'होटल आफैं बुक गर्न सक्छन् प्रस्ताव को बारे मा सबै जानकारी राम्ररी जाँच गरेर। तसर्थ, कर्मचारीहरूको कामको भार एक ठूलो स्तरमा कम हुनेछ।
यस ब्लगमा हामीले भारतको सबैभन्दा भरपर्दो अनलाईन होटेल बुकिंग प्लेटफार्म र उनीहरूका फाइदाहरूबारे कुरा गरेका थियौं। यदि तपाईं छुट्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए समय र लेग वर्क बचाउनको लागि होटेल अनलाइन बुकिंग गर्ने सबै मुख्य सुविधाहरू जाँच गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक, अनलाइन सम्झौता र प्रस्तावहरू आश्चर्यजनक छन् र तपाईं मूल्य तुलना गर्न र सबै भन्दा राम्रो सम्झौता छनौट गर्न मौका पाउनुहुन्छ।
सांप्रदायिक समाचार यात्रा
डिजिटल मार्केटिंग विश्लेषक | पाहुना ब्लगर